कुश्मा र बेनीमा खुल्यो आईएमई इन्स्योरेन्सको शाखा
निशान न्युज पुष २४, 2075
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले पर्वतको कुश्मा र म्याग्दीको बेनीमा शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ । सो शाखाहरुको उदघाटन कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. रामहरी अर्यालले गरे । कम्पनीले हाल ६९ स्थानबाट आफ्नो शाखामार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने बिभिन्न १० वटा योजनाहरु ल्य...
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको अवस्था
पुष २४, 2075 काठमाडौं । मंगलबार विदेशी मुद्राको भाउ केही पैसाले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार साउदी रियाल १ को खरिददर २९ रुपैयाँ ६५ पैसा तथा बिक्रीदर २९ रुपैयाँ ८१ पैसा तोकेको छ । कतारी रियाल १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ५४ पैसा र ...
५१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको नयाँ ...
पुष २४, 2075 काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको नयाँ नोट बजारमा ल्याउन लागेको छ । गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको हस्ताक्षर भएका १०० रुपैयाँ दरका ४० करोड थान, ५० रुपैयाँ दरका २३ करोड थान नोट चाँडै बजारमा ल्याउने तयारी ...
पर्यटन मन्त्रीको प्रश्न, अनुमानको भरम...
पुष २३, 2075 काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी जहाज प्रकरणमा लेखा समितिको उपसमितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पनि दोशी देखायो । सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ४ अर्ब ...
डा. महत भनछन्, सरकारले फजुल खर्च बढायो
पुष २१, 2075 काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पूँजी निर्माण र लगानी वृद्धिमा भन्दा सरकार फजुल खर्चमा अघि बढेको आरोप लगाएका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री महतले सरकार देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि गम्भीर नबनेको आरोप पनि लगाए । ...
चन्द्रागिरि हिल्सले १५ करोडको साधारण ...
पुष १७, 2075 काठमाडौं । चन्द्रागिरि केबलकार सञ्चालन गरिरहेको चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिले साधारण शेयर बिक्री गर्ने भएको छ । पुस ३० मा हुने साधारणसभापछि चन्द्रागिरी हिल्सले कित्ता १ सय का दरले १५ करोड बराबरको १५ लाख कित्ता शेयर बिक्री गर...
घट्यो अमेरिकी डलर, बढ्यो मलेसियन रिंग...
पुष १७, 2075 काठमाडौं । सोमबार स्थिर रहेको डलरको भाउ मंगलबार केही घटेको छ । तर मलेसियन रिंगिटको भने भाउ केही पैसाले बढेको छ । अमेरिकी डलरलगायत अरु विदेशी मुद्राको भाउ घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि अमेरिकी डलर १ को खरिद...
गुल्मीको रुरुमा खुल्यो प्रभु बैंकको अ...
पुष १५, 2075 गुल्मी । प्रभु बैंकले ग्रामिण क्षेत्रहरुमा धमाधम आफ्ना शाखा कार्यालयहरु बिस्तार गरिरहेको छ । यसैक्रममा गुल्मी जिल्लाको रुरु गाउँपालिका वडा नं. ४ रानीबास बलेटक्सारमा नयाँ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको परराष...
गोरखाको बारपाकमा खुल्यो प्रभु बैंकको ...
पुष १४, 2075 काठमाडौं । गोरखाको बारपाकमा प्रभु बैंकले आफ्नो नयाँ शाखा स्थापना गरेको छ । बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित बारपाकमा शनिबारदेखि सञ्चालनमा आएको सो बैंकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उद्घ...
यी हुन् आफ्नै पौरखले उद्यममा चम्केका ...
पुष १४, 2075 काठमाडौं । देशभरका उद्योगी–व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा भवानी राणा छिन् । महासंघको नेतृत्वमा पुग्ने उनी नै पहिलो महिला हुन् । राणा जस्तै उद्यममा चम्केका महिला भने अरु पनि छन् । कसैले पाँच...
साना लगानीको वित्तिय संस्थामाथि राष्ट...
पुष १३, 2075 काठमाडौं । साना लगानीका बैंक र वित्तिय फाइनान्समाथि राष्ट्र बैंकले अंकुस लगाएको छ । सोसँगै अब ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्ग फाइनान्स कम्पनीले अर्को प्रदेशमा शाखा संचालन गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक जि...
शेयर प्रमाणपत्र धितो राखेर ६५ प्रतिशत...
पुष १२, 2075 काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ६५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । शेयर बजार सुधारका लागि बैंकले सो व्यवस्था गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिएको हो । अर्थमन्त्री ड...
आज शेयर बजारमा उच्च अङ्कको वृद्धि
पुष ११, 2075 काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ३० दशमलव २६ बिन्दुले बढेर एक हजार २१६ दशमलव २७ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक समेत बुधबार ६ दशमलव ४१...
आज डलरसहित विदेशी मुद्राको मूल्य स्थिर
पुष ११, 2075 काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि अमेरिकी डलर १ को खरिददर १११ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ ५२ पैसा तोकेको छ । यस्तै साउदी रियाल १ को खरिददर २९ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर २९ रुपैयाँ ९९ पैसा, कतारी रिय...
आज शेयर बजारमा ओरालो
पुष ९, 2075 काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार सोमबार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ५४ प्रतिशतले घटेर एक हजार १९१ दशमलव ७४ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव सा...
← अघिल्लो 12… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … 66 67 पछिल्लो →